Home Child Care ကလေးငယျရှိတဲ့ မိခငျတှသေတိထားသငျ့တဲ့ ကလေးလညျခြောငျးနငျခွငျးအန်တရာယျ
ကလေးငယျရှိတဲ့ မိခငျတှသေတိထားသငျ့တဲ့ ကလေးလညျခြောငျးနငျခွငျးအန်တရာယျ
အလှနျသေးငယျတဲ့ ကစားစရာတှေ၊ ငှအေကွှစေတှေ့နေဲ့ သံလိုကျတှကေ အရမျးငယျသေးတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ မြိုခမြိနိုငျတဲ့ အန်တရာယျရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ သေးငယျတဲ့ ကစားစရာပစ်စညျးတှေ၊ အန်တရာယျဖွဈစနေိုငျတဲ့ ကစားစရာပစ်စညျးတှကေို မပေးဆော့ဖို့ သတိပွုရပါမယျ။ အသီးတှနေဲ့ ဟငျသီးဟငျးရှကျတှလေညျး ထို့နညျး၎င်းငျးပါပဲ။ Blogger တဈယောကျလညျးဖွဈ မိခငျတဈယောကျလညျးဖွဈတဲ့ Angela Henderson က သူမသားလေးရဲ့လညျခြောငျးထဲမှာ စပဈြသီး တဈနတေဲ့ ဓါတျမှနျတဈခုကို မြှဝခေဲ့ပါတယျ။
သွစတွေးလြ ဆေးပညာဆောငျးပါးရေးသူ၊ ကလေး ၂ယောကျရဲ့မိခငျ Angela Henderson ဟာ ၅နှဈအရှယျသားလေးရဲ့ ဓါတျမှနျတဈခုကို မြှဝခွေငျးဖွငျ့ လညျခြောငျးနငျတဲ့ အန်တရာယျကို မိဘမြားအား သတိပေးခဲ့ပါတယျ။
စပဈြသီးတဈလုံးက ၅နှဈအရှယျကလေးရဲ့ အသကျရှုလမျးကွောငျးထိပျမှာ ပိတျနခေဲ့တာပါ။ ထိုစပဈြသီးကို ဖယျရှားဖို့ ထုံဆေးပေးပွီး ခှဲစိတျခဲ့ရပါတယျ။ သူ့ရဲ့အသကျရှုလမျးကွောငျး ပှငျ့သှားတာကွောငျ့ အရမျးကံကောငျးခဲ့ပါတယျ။ ဒီလိုမှမဟတျရငျ ဆိုးရှားစှာ အဆုံးသတျနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။
စပဈြသီးကို ဘာ့ကွောငျ့ တဈခွမျးခွမျးဖို့ အရေးကွီးတာလဲ?
စပဈြသီးက ကလေးတှကေို နငျစတေဲ့ အဖွဈအမြားဆုံးအစားအစာတဈခု ဖွဈပါတယျ။ စပဈြသီးရဲ့ ပုံသဏ်ဍာနျနဲ့ အရှယျအစားက ကလေးရဲ့လညျခြောငျးမှာ တဈမိနိုငျပွီး အသကျရှုလမျးကွောငျးကို အတားအဆီး ဖွဈပျေါစနေိုငျပါတယျ။ စပဈြသီးရဲ့ မကျြနှာပွငျက ခြောမှပွေီ့း flexible ဖွဈတာကွောငျ့ နငျခဲ့ရငျ ထုတျယူဖို့ ခကျခဲပါတယျ။ အခနျ့မသငျ့ရငျ ခှဲစိတျဖယျရှားပွီး ထုတျဖို့ လိုအပျပါတယျ။
နယူးယောကျပွညျနယျ Department of Health ရဲ့အဆိုအရ လညျခြောငျးနငျခွငျးဟာ အသကျ ၅နှဈအောကျ ကလေးတှမှော အသကျဆုံးရှုံးခွငျးကို ဖွဈပျေါစတေဲ့ စတုတ်ထပွဿနာတဈခု ဖွဈပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ မိဘတှေ၊ အခွားမိသားစုဝငျမြားနှငျ့ မူကွိုကြောငျးမှ ဆရာမတှအေနနေဲ့ သိထားသငျ့ပါတယျ။
ဆရာဝနျမြားနှငျ့ အကြိုးအမွတျမယူသော အဖှဲ့အစညျးမြားက အန်တရာယျဖွဈစမေယျ့ အလားအလာရှိတဲ့ အခြို့သော အစားအစာမြားကို တံဆိပျကပျဖို့ အစားအစာ ထုတျလုပျသူမြားနှငျ့ လကျလီရောငျးခသြူမြားကို တိုကျတှနျးကွပါတယျ။ ငယျရှယျတဲ့ကလေးတှကေို တခြို့အစားအစာ ပေးထားခွငျးမှ ရှောငျကွဉျဖို့နဲ့ အစားအစာကို အစိတျသေးသေးလေးတှေ လှီးပွီးမှကြှေးဖို့ အမရေိကနျနိုငျငံ ပွညျ့သူ့အကြိုးစီးပှား( CSPI) မှာ သိပ်ပံစငျတာ ဥပဒရေေးရာညှနျကွားရေးမှူး Bruce Silverglade ကပွောပါတယျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျနဲ့ သဈသီးတှကေို ကလေးတဈကိုကျစာ လှီးဖွတျဖို့ သတိရပါ
ကလေးတှေ လညျခြောငျးနငျခွငျးကို ဖွဈပျေါစတော စပဈြသီးတဈခုတညျးတော့မဟုတျပါဘူး။ စပဈြသီးတဈလုံးအရှယျအစားရှိတဲ့ ခယျြရီခရမျးသီး၊ ဘလူးဘယျရီသီးမြားနှငျ့ တခွားလုံးဝနျးပွီး မာတဲ့အသီးတှေ ၊ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှကေလညျး အန်တရာယျရှိစပေါတယျ။ ဒီအစားအစာတှအေားလုံးကို အရှညျလိုကျပိုငျးဖွတျဖို့ မမပေ့ါနဲ့။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျ ကလေးရဲ့လညျခြောငျးမှာ တဈနနေိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ကလေးတှကေို အစားအစာကြှေးတဲ့အခါ လညျခြောငျးမှာမနငျအောငျ ဂရုတစိုကျကြှေးဖို့ လိုပါတယျ။
ကလေးငယ်ရှိတဲ့ မိခင်တွေသတိထားသင့်တဲ့ ကလေးလည်ချောင်းနင်ခြင်းအန္တရာယ်
အလွန်သေးငယ်တဲ့ ကစားစရာတွေ၊ ငွေအကြွေစေ့တွေနဲ့ သံလိုက်တွေက အရမ်းငယ်သေးတဲ့ ကလေးတွေအတွက် မျိုချမိနိုင်တဲ့ အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သေးငယ်တဲ့ ကစားစရာပစ္စည်းတွေ၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ကစားစရာပစ္စည်းတွေကို မပေးဆော့ဖို့ သတိပြုရပါမယ်။ အသီးတွေနဲ့ ဟင်သီးဟင်းရွက်တွေလည်း ထို့နည်း၎င်းပါပဲ။ Blogger တစ်ယောက်လည်းဖြစ် မိခင်တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ Angela Henderson က သူမသားလေးရဲ့လည်ချောင်းထဲမှာ စပျစ်သီး တစ်နေတဲ့ ဓါတ်မှန်တစ်ခုကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။
သြစတြေးလျ ဆေးပညာဆောင်းပါးရေးသူ၊ ကလေး ၂ယောက်ရဲ့မိခင် Angela Henderson ဟာ ၅နှစ်အရွယ်သားလေးရဲ့ ဓါတ်မှန်တစ်ခုကို မျှဝေခြင်းဖြင့် လည်ချောင်းနင်တဲ့ အန္တရာယ်ကို မိဘများအား သတိပေးခဲ့ပါတယ်။
စပျစ်သီးတစ်လုံးက ၅နှစ်အရွယ်ကလေးရဲ့ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းထိပ်မှာ ပိတ်နေခဲ့တာပါ။ ထိုစပျစ်သီးကို ဖယ်ရှားဖို့ ထုံဆေးပေးပြီး ခွဲစိတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပွင့်သွားတာကြောင့် အရမ်းကံကောင်းခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟတ်ရင် ဆိုးရွားစွာ အဆုံးသတ်နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စပျစ်သီးကို ဘာ့ကြောင့် တစ်ခြမ်းခြမ်းဖို့ အရေးကြီးတာလဲ?
စပျစ်သီးက ကလေးတွေကို နင်စေတဲ့ အဖြစ်အများဆုံးအစားအစာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ စပျစ်သီးရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ အရွယ်အစားက ကလေးရဲ့လည်ချောင်းမှာ တစ်မိနိုင်ပြီး အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကို အတားအဆီး ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ စပျစ်သီးရဲ့ မျက်နှာပြင်က ချောမွေ့ပြီး flexible ဖြစ်တာကြောင့် နင်ခဲ့ရင် ထုတ်ယူဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် ခွဲစိတ်ဖယ်ရှားပြီး ထုတ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နယူးယောက်ပြည်နယ် Department of Health ရဲ့အဆိုအရ လည်ချောင်းနင်ခြင်းဟာ အသက် ၅နှစ်အောက် ကလေးတွေမှာ အသက်ဆုံးရှုံးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ စတုတ္ထပြဿနာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိဘတွေ၊ အခြားမိသားစုဝင်များနှင့် မူကြိုကျောင်းမှ ဆရာမတွေအနေနဲ့ သိထားသင့်ပါတယ်။
ဆရာဝန်များနှင့် အကျိုးအမြတ်မယူသော အဖွဲ့အစည်းများက အန္တရာယ်ဖြစ်စေမယ့် အလားအလာရှိတဲ့ အချို့သော အစားအစာများကို တံဆိပ်ကပ်ဖို့ အစားအစာ ထုတ်လုပ်သူများနှင့် လက်လီရောင်းချသူများကို တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကို တချို့အစားအစာ ပေးထားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ဖို့နဲ့ အစားအစာကို အစိတ်သေးသေးလေးတွေ လှီးပြီးမှကျွေးဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ပြည့်သူ့အကျိုးစီးပွား( CSPI) မှာ သိပ္ပံစင်တာ ဥပဒေရေးရာညွှန်ကြားရေးမှူး Bruce Silverglade ကပြောပါတယ်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေကို ကလေးတစ်ကိုက်စာ လှီးဖြတ်ဖို့ သတိရပါ
ကလေးတွေ လည်ချောင်းနင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေတာ စပျစ်သီးတစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စပျစ်သီးတစ်လုံးအရွယ်အစားရှိတဲ့ ချယ်ရီခရမ်းသီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီးများနှင့် တခြားလုံးဝန်းပြီး မာတဲ့အသီးတွေ ၊ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကလည်း အန္တရာယ်ရှိစေပါတယ်။ ဒီအစားအစာတွေအားလုံးကို အရှည်လိုက်ပိုင်းဖြတ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် ကလေးရဲ့လည်ချောင်းမှာ တစ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေကို အစားအစာကျွေးတဲ့အခါ လည်ချောင်းမှာမနင်အောင် ဂရုတစိုက်ကျွေးဖို့ လိုပါတယ်။
Previous articleဘာသာစကားခကျခဲတဲ့ ကလေးကို ကူညီဖို့ လကေ့ငျြ့ခနျး (၆)ခု
Next articleဘဘေီလေးတှကေို အမွဲတမျးပှဖေ့ကျပေးခွငျးက သူတို့ရဲ့ DNA ကိုပိုကောငျးစတေယျလို့ သိပ်ပံပညာရှငျမြားကဆို